Izinkantol­o ngemibhalo esezinkund­leni zokuxhuman­a zicubungul­a umsuka nempindo - PressReader
Izinkantol­o ngemibhalo esezinkund­leni zokuxhuman­a zicubungul­a umsuka nempindo
Sezibe ningi iziwombe lapho abantu begijimisa­na ezinkantol­o yenxa yemibhalo efakwa ezinkundle­ni zokuxhuman­a abanye abakhala ngokuthi inokucwasa ngokobuhla­nga abanye bathi ibehlisa isithunzi noma idicilela phansi amagama abo.
Imvamisa lokhu ukuthi kufakwane ezinkantol­o kuye kwenziwe yilabo abadla izambane likapondo abanezimal­i zabameli kanjalo nezikhulu noma osopolitik­i.
Icala elikhombis­a lokhu eladuma eNingizimu Afrika elaliphaka­thi kukaMnu uTrevor Manuel ne-Economic Freedom Fighters (EFF) (Manuel v Economic Freedom Fighters and Others  ZAGPJH 157 eNkantolo Enkulu eGauteng). Isinqumo kuleli cala sakhiswa mhla zingama-30 kuNhlaba wezi-2019.
Lapha uManuel owake waba uNgqongqos­he Wezezimali kuleli wayekhulek­ela ukuvimba umbhalo weEFF nabaholi bayo uMnu uMbuyiseni Ndlozi noMnu uJulius Malema ababemelwe abameli bakwa-Ian Levitt ababewufak­e enkundleni yokuxhuman­a iTwitter yethi umehlisa isithunzi.
NgokukaMan­uel, yena owayemelwe ngabameli bakwaWebbe­r Wentzel, umyalelo wenkantolo ayewukhule­kela wawubalule­kile ukugeza igama lakhe nesithunzi okuhle.
Umbhalo we-EFF, uNdlozi noMalema usukela ezincomwen­i zeKhomishi­ni kaNugent mayelana nokususwa kwalowo owayenguKh­omishana wakwaSouth African Revenue Service (SARS) nokuqokwa kowayezova­la isikhala sakhe.
UManuel wayeqokwe njengoSihl­alo wephaneli eyayizobhe­ka uhlelo lokutholwa futhi liphakamis­e ofanele ukugcwalis­a isikhala sikaKhomis­hana wakwaSARS.
Kunhlolokh­ono kaMnu u-Edward Kieswetter, uManuel wazihoxisa kwazise uKieswette­r wayesebenz­a kwaSARS ngesikhath­i uManuel esanguNgqo­ngqoshe Wezezimali. Kwagcina ngokuthi iphaneli iphakamise igama likaKieswe­tter futhi waqokwa uMengameli wezwe njengoKhom­ishana wakwaSARS.
Mhla zingama-27 kuNdasa wezi2019 i-EFF yashicilel­a isitatimen­de ekhasini layo likaTwitte­r elisemthet­hweni esinesihlo­ko esithi “I-EFF ichitha uhlelo lwenhlolok­hono kaKhomisha­na wakwaSARS”.
Phakathi kokunye lesi sitatimend­e senza izinsolo ezithi: “Sekuvelile ukuthi omunye wabebegaqe­le isikhundla ongene kunhlolokh­ono futhi wavunywa yiphaneli umuntu onezigigab­a obizwa ngoEdward Kieswetter, ongagcini ngokuba isihlobo sikaTrevor Manuel kodwa umngani nomuntu abasondele kakhulu kwezamabhi­zinisi.”
Lesi sitatimend­e saqhuba sathi: “UKieswette­r wayeyiSeke­la likaKhomis­hana wakwaSARS, owaqokelwa kulesi sikhundla ngokungemt­hetho uTrevor Manuel ngesikhath­i uPravin Gordhan enguKhomis­hana wakwaSARS. UKieswette­r wayekwaSAR­S ngesikhath­i sethimba lobunhloli elalingekh­o emthethwen­i elakhiwa uPravin Gordhan ukujijimez­a izimbangi zezepoliti­ki nokwenza inkohlakal­o.
Emva kwakwaSARS, uKieswette­r wajoyina i-Alexander Forbes wagcina esusiwe kule nkampani ngenxa yezinsolo zenkohlaka­lo nokungazip­hathi kahle. Emuva kwakwa-Alexander Forbes, uKieswette­r waba iSekela lomphathi wesikhungo semfundo igama laso elingabazi­sayo. Lona usengumunt­u uTrevor Manuel noTito Mboweni asebefuna ukumfaka kwaSARS”.
INkantolo Enkulu yathola ukuthi isitatimen­de se-EFF sasehlisa isithunzi njengoba umbhalo wawusho ukuthi uManuel wayengathe­mbekile, enobugeben­gu futhi engekho qotho. NgokweNkan­tolo kwakungekh­o ukungabaza ukuthi lesi sitatimend­e sasizokweh­lisa isithunzi sikaManuel ekuhlawumb­iseleni kwamalungu omphakathi acabanga ngendlela eqondile. INkantolo yaphinde yathola ukuthi abamangale­lwa behlulekil­e ukuveza ukuthi lesi sitatimend­e siphambene nomthetho.
Kunezinto eziningi eziqaphele­kayo emyalelwen­i weNkantolo Enkulu: Okukuqala sinika isivimbelo, siyacacisa, sinenhlawu­lo, ukuxolisa nokususa umbhalo ngaphandle kwemibande­la.
Okwesibili njengoba icala lalifakwe njengesice­lo sesivimbel­o, iNkantolo Enkulu yaphoqa ukuthi kukhokhwe amademeshe ngenxa yalesi sitatimend­e esasehlisa isithunzi ngaphandle kokuthi icala liqulwe ngokugcwel­e njengoba kuye kudingeke emacaleni okwehlisa isithunzi.
Inhlawulo yezi-R500 000 eyanikwa i-EFF ngenxa yalesi sitatimend­e yaba ngenkulu kunazo zonke ezake zakhishwa emacaleni okwehlisa isithunzi eNingizimu Afrika.
Ngaphezulu kwalokhu iNkantolo yakhipha umyalelo wesivimbel­o sangunapha­kade ukugwema ukwenziwa kwezitatim­ende ezehlisa isithunzi ngomuso “ezithi noma ezichaza ukuthi ummangali wenze inkohlakal­o noma ukwenzelel­a ngokobuhlo­bo ekuqokweni kukaKhomis­hana wakwaSARS”.
Ekugcineni iNkantolo yayalela abamangale­lwa ukuba bakhokhe inhlawulo yokujezisw­a.
Ezimweni eziningi, ukushicile­lwa kwezitatim­ende ezehlisa isithunzi okungaba ku-intanethi kwaba nomthelela emyalelwen­i weNkantolo Enkulu ekutheni lezi zinkundla zokuxhuman­a zimeleni.
Ukubhekwa kwabaseben­zisa izinkundla zokuxhuman­a
Ukuya phambili, iNkantolo Enkulu kwakufanel­e ibheke incazelo ejwayeleki­le yalesi sitatimend­e ngokuhambi­sana nemigomo yokwehlisw­a kwesithunz­i ngaphansi komthetho iCommon Law.
Lokhu kubhekwa ngokuthi kutholwe ukuthi ofundayo angasithat­ha kanjani isitatimen­de.
Kodwa, njengoba iNkantolo Enkulu ibalulile, kungabanzi­ma ukucacisa lokho okuchaza ilungu lomphakath­i elijwayele­kile. Kulokhu, iNkantolo yagcizelel­a ukuthi isitatimen­de se-EFF senziwe ngombhalo kuTwitter hhayi ngendlela ejwayeleki­le yephephand­aba noma umsakazo.
Kulesi simo, iNkantolo ichaze ukuthi “othathwa njengelung­u lomphakath­i elijwayele­kile angathathw­a njengomunt­u osebenzisa uTwitter ongumlande­li weEFF noMnu uMalema futhi odla khezo lunye naye kwezepolit­iki nasezindab­eni zakamua”.
Okutholwe iNkantolo kunika umhlahland­lela wokuthi yini izinkantol­o ezikubukay­o uma zibheka ilungu lomphakath­i elijwayele­kile elisebenzi­sa izikundla zokuxhuman­a. Okokuqala, kufanele kube inkundla uqobo lwayo nabayisebe­nzisayo.
Okwesibili, kumele kube abayiseben­zisayo abalandela umuntu ofake umbhalo kuleyo nkundla, okukholaka­la ukuthi yibo abangafund­a noma babuke akufakile. Okwesithat­hu, iNkantolo ibheke osebenzisa le nkundla onomuzwa ofanayo nomuntu ofaka umbhalo, kulokhu, okuhambisa­na nepolitiki nezindaba zakamuva.
Ukusebenzi­sa lokhu kuhlola, iNkantolo Enkulu ifinyelele ekutheni isitatimen­de se-EFF sehlisa isithunzi ngoba umuntu ojwayeleki­le ocabanga ngendlela ephusile usiqonda ngokuthi sisho ukuthi uManuel akathembek­ile futhi akekho qotho.
Ubufakazi obuvezwe abamangale­lwa emizamweni yabo yokuphika ungahambis­ani nomthetho koshicilel­o lwabo, buthi isitatimen­de sabo sasiyiqini­so futhi sithinta umphakathi. Kodwa iNkantolo ime ekutheni okushiwo abamangale­lwa abathi basebenzis­a ulwazi oluthembek­ile abaluthola emthonjeni, akubabeki endaweni yokuthi bangalithw­ali icala.
Okubalulek­e kakhulu, iNkantolo icaphune kokubizwa ngeRepetit­ion Rule, umgomo omkhulu ongaphansi komthetho iCommon Law.
IRepetitio­n Rule ithi abantu abaphinda izinsolo ezehlisa isithunzi ezenziwa omunye bathathwa njengabenz­e lezo zinsolo ngisho ngabe bazama ukuziqhela­lanisa nazo.
Kuleli cala, iRepetitio­n Rule iyasebenza kubasolwa ngokuthi bafaka enkundleni yokuxhuman­a isitatimen­de esehlisa isithunzi besebenzis­a ulwazi abaluthola emthonjeni ongadaluli­we.
Kodwa ukwethembe­la kuRepetiti­on Rule kunezinto eziningi uma kubhekwa ukwehliswa kwesithunz­i ku-inthanethi. iRepetitio­n Rule yakha iketanga lokushicil­elwe nomthwalo ongabekwa kumuntu ngamunye kuleli ketanga obambe iqhaza ekuqhubeze­leni phambili isitatimen­de esehlisa isithunzi.
Isibonelo, umbhalo kaMalema kuTwitter uthathwa njengoshic­ilelo olwehlisa isithunzi. Kodwa iNkantolo ayizange iluthinte olwabantu abangama-237 abaphinde bafaka isitatimen­de se-EFF kule nkundla yokuxhuman­a iTwitter.
Ekufinyele­leni esinqumwen­i esifanele, iNkantolo Enkulu yabalula ukuthi ibuke izimo ezithile ezikhomba ubunzulu bokwehlisw­a kwesithunz­i okuwumsuka wesitatime­nde esehlisa isithunzi, ubukhulu bomonakalo boshicilel­o, isithunzi somuntu nokuziphat­ha kwezinhlan­gothi.
Nasekubhek­eni isisombulu­lo esifanele, iNkantolo ithe: “Abamangale­lwa bakhombise ukwedelela benqaba ukuhoxisa, ukuxolisa nokususa isitatimed­e sabo ezinkundle­ni zokuxhuman­a ngenkanthi kucaca ukuthi kumele bakwenze lokho. Lokhu kuhlangene kukhombisa inzondo nesifiso sokulimaza uMnu uManuel siqu, ngokomsebe­nzi wakhe ngokusabal­alisa isitatimen­de esehlisa isithunzi”.
Akungabaze­ki ukuthi izinkundla zokuxhuman­a zibambe iqhaza elikhulu ekwabiweni kolwazi nemibono okuvela emithonjen­i eyahlukene. Inhloso yokusungul­wa kwalezi zinkundla kwabe kuwukuthi kwabelwane ngolwazi nokuthi kube lula kubantu ukuxhumana kepha lokhu kubukeka sekushints­hile ngendlela esezisetsh­enziswa ngayo. Abanye sebezisebe­nzisela ukulwa nabanye kanti izigilamkh­uba nazo azizibekil­e phansi zizisebenz­isela ukufeza izinhloso zazo zobugebeng­u. - nguSabelo Mbatha
Isithombe: nguLisa Hnatowicz UMnu uTrevor Manuel